कर्मचारीहरुलाई तिहारमा यती धेरै दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको यस्तो आदेश? – List Khabar
Home / समाचार / कर्मचारीहरुलाई तिहारमा यती धेरै दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको यस्तो आदेश?
admin4weeks ago समाचार Leaveacomment 115 Views
बैंकका कर्मचारी हरुलाई तिहारमा ४ दिन बिदा दिइएको छ । यस वर्षको तिहारमा बैंकमा कर्मचारीलाई कात्तिक १८ गतेदेखि २१ गतेसम्म बिदा दिइएको होनेपाल राष्ट्र बैंकको जनशक्ति व्यवस्थापन विभागले यस अघि उक्त दिन बैंकहरु बिदा हुने सूचना सार्वजनिक गरेको छ ।
जसअनुसार कात्तिक १८ गते लक्ष्मी पुजा/महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्मजयन्ती, कात्तिक १९ गते गोवर्धन पुजा/गाईगोरु पुजा, कात्तिक २० गते भाईटिका र २१ गते तिहार बिदा दिइएको हो ।उक्त दिन हुने बिदाका लागि नेपाल सरकारले पनि राजपत्रमा नै उल्लेख गरिएको छ।
काठमाडौँ । कवाडीमा बेच्न राखिएको थोत्रो कुच्चिएको चम्चाले एक व्यक्तिको भाग्य पल्टिएको छ। यी व्यक्तिले लण्डनमा केवल २० पेन्स (३० रुपैयाँ) मा एउटा थोत्रो कुच्चिएको चम्चा किनेका थिए।
यी व्यक्तिलाई त्यो चम्चा दुर्लभ मध्यकालीन चम्चा हुन सक्ने महशुस भइरहेको थियो। यो चम्चाले आफ्नो भाग्य बदल्न सक्ने महशुस भएरै उनले त्यो चम्चा किनेका थिए।
मेट्रोको रिपोर्टअनुसार चम्चा किनिसकेपछि यसको जाँच गराउँदा त्यो चम्चा १३ शताब्दीको अन्त्यतिर बनाइएको चाँदीको चम्चा भएको खुलासा भयो। उनलाई यो चम्चा दुर्लभ भएको थाहा भएसँगै उनले समरसेटका लरेन्स लिलामीकर्तासँग सम्पर्क गरे र लिलामीको लागि त्यो चम्चालाई दर्ता गराए।
चम्चालाई अनलाई लिलामीको लागि दर्ता गराइएपछि त्यसलाई किन्न चाहनेहरुको बोलकबोल बढ्दै गयो। केही समयसम्म बोलकबोल जारी रहेपछि अन्ततः त्यो चम्चा २ हजार ३७५ पाउण्डमा बिक्री भयो।
यो चम्चा बिक्री भएपछि बिक्री गर्ने व्यक्तिले सामाजिक संजालमा आफूले आफ्नी छोरीको साथमा अनलाइनमा लिलामी हेरिरहेको र आफूलाई विश्वास नभएको लेखेका छन्। लिलामीकर्ताका अनुसार यी व्यक्ति अब पूर्वी इङल्याण्डमा विदा मनाउन यो पैसा खर्च गर्ने तयारीमा छन्।
Next फोन उठाउने बित्तिकै `हेलो´ भन्ने चलन कहाँबाट कसरी आयो त ? जान्नुहाेस्